Muxuu yahay hubka Ruushka uu ku tijaabiyay cirifka dunida? | Xaysimo
Home War Muxuu yahay hubka Ruushka uu ku tijaabiyay cirifka dunida?
Hay’adda qaran ee Ruushka u qaabilsan nukliyeerka Rosatom, waxay sheegtay in khubarada ay tijaabinayeen matoor laga sameeyay nukliyeer. Balse ma aysan bixin faafaahin dheeraad oo la xiriirta dhanka farsamada.
Qaraxa waxaa ka dhashay shucaac halis ah oo hawada ku jiray muddo 30 daqiiqo ah kaas oo cabsi geliyay magaalada Severodvinsk oo 40km u jirta heerka tijaabada la sameeyay, waxayna saaran tahay Badda Cad.
Tijaabada Nyonoksa waxay soo billaabatay xilligii Soviet-ka
Madxafka Sarov (Sawirka 1997)